Ny fomba 13 izay fanaintainana ara-pihetseham-po dia ratsy kokoa noho ny fanaintainana ara-batana - An-Tsaina
Ny vatan'olombelona dia zavatra mahafinaritra. Izy io dia mifehy tena, mitazona tsara ny tenany ary manana rafitra be pitsiny hampitandrina antsika ny amin'ny tsy fetezana. Rehefa misy ny reraka sy ny triatra dia raisintsika ho fikojakojana.
Ny fahasalamantsika ara-pientanam-po anefa dia tsy dia mifantoka firy.
Andre ilay ady fahatsiarovana goavambe goavambe
Tapaka, tsy voakarakara, dia ho voan'ny aretina. Fantatsika izany raha ny marina. Ka tsy avelantsika hitranga izany. Diovinay ny ratra, afatory, ary raha ratsy dia mankanesa any amin'ny dokotera.
Fa ratram-po sa diso fanantenana? O, avelantsika hirehitra ireo! Handeha lavitra hanao mody tsy misy ratra isika, ary rehefa miharatsy na miparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny fiainantsika ny ratra ara-pihetseham-po dia tsy raharahaintsika koa izany.
Ireto misy fomba 13 izay mahatonga ny fanaintainana ara-pihetseham-po ho sarotra kokoa noho ny fanaintainana ara-batana (tsy hanilika ny fanaintainana ara-batana ho tsy misy dikany amin'ny fomba INDRINDRA):
1. Fanaintainana miverimberina
Ny fanaintainana ara-pientanam-po dia azo iainana indray hatrany ary tsy misy fanalefahana fanaintainana na soritr'aretina. Matetika, arakaraky ny tsy mampijaly antsika amin'ny fanaintainana ara-pihetseham-po manokana no maharatsy azy.
2. Antony tsy fantatra
Matetika ny fanaintainana ara-batana dia misy antony mazava. Ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia mety ho zavatra feno rahona feno fihodinana sy fikorontanana izay manelingelina ny famantarana ny fotony.
Maharitra ny alahelo. Hikatona ny sandry tapaka afaka volana vitsivitsy. Ny fo torotoro dia toa tsy misy farany.
Misy ambaratongan'ny fahatezerana tena raha resaka fanaintainana ara-pihetseham-po. Miaraka amin'ny vatana, hanaiky avy hatrany isika fa hitranga ny aretina na ny fihenjanana, ampahany amin'ny fianan'ny zanak'olombelona izy ireo. Na izany aza dia mieritreritra izahay fa tokony ho afaka amin'ny fanaintainana ara-pihetseham-po isika, ary rehefa mahatsapa izany isika dia tezitra amin'ny tenantsika noho ny tsy fisian'ny fiheverana diso tafahoatra.
Ny famerenan-tena dia tsy nanakana ny sandriny tsy ho sitrana, fa vita mihoatra ny fizarana ara-drariny amin'ny fanahy sy ny psyches izany.
5. Ilay aloka mavesatra
Ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia mitondra rahona tsy hita maso sy tsy hita maso. Ny fanaintainana ara-batana dia miteraka fangorahana eo noho eo, fa mino izahay fa ny fanaintainantsika ara-pihetseham-po dia miaraka aminy ny stigma amin'ny daty fahataperana: ny alahelo dia tsy tokony haharitra aretim-po mandritra ny fotoana maharitra, raha tsy hoe mametraka endrika diso fanantenana ianao dia mifanentana amin'ny fatra tadiavinao. zavatra mbola tsy nahavita azy noho ny tsy fahaizanao manokana.
Ny vesatra mavesatra sy tsy hita maso eritreretintsika fa ny hafa manangona eo an-tampon'ny fanaintainantsika ara-tsaina / ara-pihetseham-po na manala tanteraka ny fanasitranana antsika.
Ivelan'ny aretina mifindra dia voafetra ho anao ihany ny fanaintainana ara-batana. Ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia hafindra amin'ny hafa. Izany dia mitranga amin'ny alàlan'ny mekanika ara-psikolojika marobe, fa ny mahazatra indrindra dia famindran-toerana , izay hamindrantsika fihetseham-po ratsy amin'ny olon-kafa na zavatra hafa fa tsy hanoherana ny antony voalohany (ary, amin'ny fifanatrehana, dia mety hahasitrana haingana kokoa na hisoroka ratra tanteraka).
7. Fandrasana mialoha
Matahotra ny fanjaitra isika rehefa manakaiky, fa rehefa vita ny paosy dia vita. Ny fiandrasana fanaintainana ara-pientanam-po (hoy ny fisarahana amin'ny olon-tiana na ny fahalavoana miaraka amin'ny sakaiza) dia miteraka toe-javatra lava tsy mampientanentana mankany amin'ny fanaintainana andrasana, avy eo manamafy ireo andro fanaintainana, volana, na taona maro taorian'ny hetsika.
8. Tsy azo vinavinaina
Ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia mety mitokona, mampirehitra, na miverina miverina amin'ny fotoana rehetra, na dia amin'ny andro tsapanao aza fa tsy manana ahiahy indrindra ianao. Zavatra kely bitika mandrisika ny areti-pihetseham-po , zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny antony tany am-boalohany ka na ny andro fahavaratra mazava aza dia mety hanajamba anao.
Fitsipika 3 hanasitranana ratra ara-pihetseham-po
Maninona no diso ny mino fa mendrika ny hahatsapa fanaintainana
9. Fanaintainana Phantom
Indraindray, ny fanaintainana ara-pihetseham-po tsapanao fa tsy anao manokana. Fiaraha-miory, fangorahana, fahalalam-pomba fototry ny olombelona - ireo rehetra ireo dia afaka mampihetsi-po antsika amin'ny fanaintainan'ny hafa, mamela antsika ho maratra, hafangaro ary matahotra mandra-pahalasan'ny fahatsapana.
Angamba ny fomba hafahafa indrindra fa ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia ratsy kokoa noho ny fanaintainana ara-batana dia ny toetra mampiankin-doha miaraka amin'ny fahatsapana ho ratsy. Eny, misy ireo mankafy fanaintainana ara-batana, saingy vitsy an'isa ireo izay mahazo endrika fampiononana hafahafa amin'ny alàlan'ny fangorahan'ny hafa.
Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, ity karazan'olona ity dia manana fironana hiovaova amin'ny alahelo ara-pihetseham-po hafa.
11. Andrasana amin'ny fiaraha-monina
Satria tsy hita maso ny fanaintainana ara-pientanam-po dia heverintsika fa toy ny rivotra izany: ankehitriny, nefa zavatra tsy tokony hoeritreretintsika. Manantena izahay fa tsy ho afa-mihetsika izy io ary tsy hisy fiantraikany amin'ny lafin-javatra hafa amin'ny fiainantsika, izany hoe ny asantsika, ny fifandraisantsika, na ny fihetsika tokony hataontsika isan'andro.
inona ny tena anarana cm punk
Ity fientanam-piarahamonina 'ahintsana ary hiasa ara-dalàna' ity dia mitarika fahatsapana ho menatra sy tsy fahampiana rehefa manaikitra mafy ny fanaintainana ara-pihetseham-po ka hihozongozona, mampitombo ny toe-javatra iray efa tsy milamina.
Saingy tsy misy 'manaisotra' maso malemy, taolan-tehezana tapaka, na aretina diabeta.
12. Ratra tsy voatsabo
Mampalahelo fa ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia matetika raisina ho mariky ny fahalemena, koa manandrana mitady fomba tsy hiraharaha na handevina ny fanaintainantsika izahay, izay tsy misy afa-tsy ny fampitomboana ny haavon'ny fihenjanana (izay misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-batana).
Mahagaga fa amin'ny vanim-potoana iainantsika fandrosoana siantifika tsy manam-paharoa sy ny fahatakarana vaovao an'ny vatana / saina , fitsaboana, torohevitra, na fisaintsainana tsotra fotsiny aza dia mitohy mitondra stigmas. Noho ireo fanilikilihana ireo dia olona maro no tsy mitady fanampiana rehefa mitondra azy ireo amin'ny fiainana ambany ny fiainana.
Ny marina dia, afaka mampiasa fanampiana ara-pientanam-po sy ara-tsaina ary ara-panahy isika rehetra. Na inona na inona ratra tsy hita, tsy misy mahamenatra ny mila manasitrana. Ny fahafantarana fa afaka - ary hanao - manasitrana dia manampy.
13. Tsy misy ifotony
Ny fanaintainana ara-batana matetika dia mora voamarika. Raha marary ny sandrinao dia fantatrao hoe iza izy io, ary tsy miteraka ratra amin'ny tananao hafa izany. Raha manana sery ianao dia fantatrao ny faritra amin'ny vatana mety ho voakasik'izany.
Ny fanaintainana ara-pihetseham-po kosa dia miparitaka ivelany amin'ny lafiny rehetra amin'ny vatanao iray manontolo. Ny alahelo ara-pihetseham-po dia hiteraka aretin'andoha, aretin-damosina, olana amin'ny fandevonan-kanina, olana amin'ny torimaso, tsy fahampian'ny sain'ny olona, ​​fahasosorana ara-nofo….
Ny fanaintainana dia fanaintainana
Ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia toy ny fanaintainana ara-batana. Vokatry ny fahasimbana ivelany toy ny rantsantanana tapaka ihany. Ny tsirairay dia miaina fanaintainana ara-pientanam-po ny tsirairay manasitrana amin'ny fomba samy hafa sy amin'ny isan-karazany, mitovy amin'ny hery fiarovan'ny vatana sy ny fanavaozana ny vatana miasa mba hanasitranana ny fahasimban'ny vatana.
Rehefa manafaka ny tenantsika amin'ny fiheverana diso izay heverina fa matanjaka isika amin'ny resaka fahakiviana ara-pihetseham-po, na hoe: 'ao an-tsaina' ny fanaintainana ara-pihetseham-po, dia mamela ny tenantsika ho olombelona isika fa tsy ireo sary nohetezana baoritra tsy natao hitomaniana, hatezerana , na mahatsiaro ketraka.
Angamba ny fomba mampalahelo indrindra fa ny fanaintainana ara-pihetseham-po dia ratsy kokoa noho ny fanaintainana ara-batana dia ny famelantsika irery ny fanaintainana ara-pihetseham-po any ivelany, raha ny marina, dia manasitrana haingana kokoa ao amin'ny orinasa sy ny fon'ireo izay mikarakara izany.
manasonia lehilahy tia anao any am-piasana
Ahoana no ho fantatra raha ny mpiara-miasa taminy tia anao
rehefa bandy miantso anao mahafatifaty
ny telozoro an-tsehatra sy ny fomba hialana amin'izany
alatsinainy alina alina septambra 21